हिजो दूर्घटनाग्रस्त भएको बिमानबारे नयाँ खुलासा, चालक पनि जिवितै – - Enepali Online
हिजो दूर्घटनाग्रस्त भएको बिमानबारे नयाँ खुलासा, चालक पनि जिवितै –
Written by:Enepali OnlinePosted on: March 13, 2018
२९ फागुन – ५० जनाको ज्यान जानेगरी सोमबार, फागुन २८ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भएको युएस बांग्ला एयरलाइन्सको विमानका पाइलट अबिद सुल्तान जीवित रहेको जानकारी ढाकास्थित कम्पनीको कार्यालयले दिएको छ ।
जहाजकी को-पाइलट पृथुला रशिद काठमाडौँ मेडिकल कलेज हस्पिटलमा उचारको क्रममा मृतक भएको पनि उक्त बायु सेवा कम्पनीले जनाएको छ ।
७८ सीट भएको बम्बार्डियर ड्याश ८ क्यु ४०० जहाज सोमबार बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट ६७ यात्री र ४ जना चालक दलका सदस्य लिएर काठमाडौँका लागि उडेको थियो । काठमाडौँमा अवतरण गर्ने क्रममा दिनको २:२० बजे जहाज दुर्घटना भयो, जसमा ४९ जनाले ज्यान गुमाए ।
ढाकाबाट प्रसारित विवरणमा नयाँ तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । पाइलट अविद सुल्तानलाई कम्पनीले ४ वटा लगातार उडान भर्ने दायित्व सुम्पेको थियो । काठमाडौँ आउनुअघि उनले क्यानाडादेखि ढाकासम्म करिब १६ घण्टा जहाज उडाएका थिए ।
बीचमा आरामको समय नपाएकाले पाइलटको थकान र त्यसबाट निर्णय क्षमतामा पुगेको असरबारे यसले नयाँ बहसलाई जन्म दिने देखिन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर हरुको सम्बादबाट पाइलटले टावरको निर्देशनका बाबजूद बाटो बिराएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, दुर्घटनामा जीवित रहेका यात्रुहरुको बिवरणले जहाज अवतरण अघि नै कम्पन महसूस भएको देखाएको छ । यसबाट जहाजमा प्राविधिक खराबी थियो कि थिएन भन्ने बारे छुट्टै जांच हुनेछ । पाइलट जीवित रहेकाले प्राविधिक पक्षबारे थप प्रकाश पार्न जाँचबुझ समितिलाई सजिलो हुनेछ । क्यानाडाबाट ढाका आएको जहाज नै ढाकाबाट काठमाडौँ उडेको पनि बिमान कम्पनीले जनाएको छ ।
Health, News, rashiphal, SIDHA KURA JANATA SANGA, sports, VIDEO, दुखद घटना
Previous Post Previous post: महन्थ ठाकुर पुगेलगत्तै भक्कानिएर रोए रेशम चौधरी, अनि बज्यो ओलीको फोनमा घण्टी
Next Post Next post: ‘केएमसीमा छु, आमालाई भन्दिनुहोला,’ फोनमा यति बोलेकी प्रिन्सी आइसियुमा: दुबईबाट फर्केकी शोभा भगवान पुकार्दै…
बधाई छ : कुलमान घिसिङ यस वर्षको ‘सीइओ अफ द एयर’ घोषित ! पपुलर अवार्ड सहित ३ अवार्डद्वारा सम्मान !
क्रिकेटर बास्कोटासहित डेजाभू सञ्चालक पक्राउ, मार्समेलो भने फाइभ स्टारमा
कतै तपाइको स्तनमा पनि गिर्खा त छैन ? समयमै ख्याल राख्नुहोस
Enepali Online October 29, 2017 0